လည်ပင်း၊ ဂုတ် ညိုမည်းနေ လျှင်……. – May Sharing
လည်ပင်း၊ ဂုတ် ညိုမည်းနေ လျှင်…….
October 5, 2020 Bain Taw
လည်ပင်း ဂုတ် ညိုမည်းနေ လျှင်
မျက်နှာကိုပဲ ဂရုစိုက်ရင်း ငွေတွေ အများအပြား အသုံးပြုကြပေမယ့် လည်ပင်းကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျှော့နေတတ်ကြပါတယ်။မိတ်ကပ်လိမ်းရင်တောင် လည်ပင်းကိုလိမ်းပေးဖို့ မေ့တတ်ကြ သူတွေ ရှိပါ တယ်။ဒီတော့ မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရအောင်ပါ။
အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောပြီး လည်ပင်ပေါ်မှာ ပွတ်လိမ်းပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေနွေးနဲ့ ဆေးချပါ။ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ အသားအရေ ဖြူဝင်း စိုပြေ လာမှာပါ။
စန္ဒကူး နံ့သာမှုန့် (သို့) ရွှံ့စေးမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီး တစ်ခြမ်း (အရည်ညှစ်)
ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောမွှေလိုက်ပါ။ နို့အေးကိုတော့ လိုသလောက်ထည့်ပါ။ အရည်ကို ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ လည်ပင်းမှာ လိမ်းပေးရမှာပါ။ပြီးရင် ၁၅ မိနစ်လောက် ထားပြီး ခြောက်အောက်ထားပါ။ အဲဒီနောက် ရေနွေးနဲ့ ဆေးချပါ။အသားအရေ ခြောက်နေတယ်ခံစားရရင် Moisturiser လိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်လုပ်ပါ။ တစ်လအတွင်း သိသာ လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
လညျပငျး ဂုတျ ညိုမညျးနေ လြှငျ
မကြျနှာကိုပဲ ဂရုစိုကျရငျး ငှတှေေ အမြားအပွား အသုံးပွုကွပမေယ့ျ လညျပငျးကို ဂရုစိုကျဖို့ မေ့လြှော့နတေတျကွပါတယျ။မိတျကပျလိမျးရငျတောငျ လညျပငျးကိုလိမျးပေးဖို့ မေ့တတျကွ သူတှေ ရှိပါ တယျ။ဒီတော့ မကြျနှာပဲဖွူပွီး လညျပငျးကွီးမညျးနရေငျလညျး အဆငျမပွပေါဘူး။ လညျတိုငျဖွူဖွူလေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ သဘာဝနညျးလမျးကို အသုံးပွုရအောငျပါ။
မှုန့ျဖုတျဆိုဒါ လကျဖကျရညျဇှနျး ၂ ဇှနျး
အုနျးဆီ လကျဖကျရညျဇှနျး ၂ ဇှနျး
ဆား လကျဖကျရညျဇှနျး ၃ ဇှနျး
ပါဝငျပစ်စညျးအားလုံးကိုရောပွီး လညျပငျပေါျမှာ ပှတျလိမျးပေးရမှာပါ။ ပွီးရငျ ၁၀ မိနဈလောကျထားပွီး ရနှေေးနဲ့ ဆေးခပြါ။ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးနိုငျမှာဖွဈလို့ အသားအရေ ဖွူဝငျး စိုပွေ လာမှာပါ။
စန်ဒကူး နံ့သာမှုန့ျ (သို့) ရှှံ့စေးမှုန့ျ လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး
သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီး တဈခွမျး (အရညျညှဈ)
ပါဝငျပစ်စညျးအားလုံးကို ရောမှှလေိုကျပါ။ နို့အေးကိုတော့ လိုသလောကျထည့ျပါ။ အရညျကို ပစြျပစြျလေးဖွဈအောငျလုပျရမှာဖွဈပွီးတော့ လညျပငျးမှာ လိမျးပေးရမှာပါ။ပွီးရငျ ၁၅ မိနဈလောကျ ထားပွီး ခွောကျအောကျထားပါ။ အဲဒီနောကျ ရနှေေးနဲ့ ဆေးခပြါ။အသားအရေ ခွောကျနတေယျခံစားရရငျ Moisturiser လိမျးပေးပါ။ တဈပတျကို ၂ ကွိမျလုပျပါ။ တဈလအတှငျး သိသာ လာမှာဖွဈပါတယျ။
Previous: လေးဘက်နာ အတွက် သက်သာစေမယ့် သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်း တစ်လက်
Next: သွေးတိုးရောဂါကို ငွေအကုန်အကျမရှိပဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေမည့် နည်းလမ်း